Uluqhuba kanjani uvavanyo lwe-A / B kwiphepha lokufika kwakho | Martech Zone
NgoLwesibini, nge-16 kaDisemba ngo-2014 NgoLwesibini, nge-16 kaDisemba ngo-2014 Douglas Karr
I-Lander liqonga lephepha lokufika elifikelelekayo elinokuvavanywa ngamandla kwe-A / B kufumaneke kubasebenzisi ukonyusa amaxabiso akho okuguqula. Uvavanyo lwe-A / B luyaqhubeka luyindlela eqinisekisiweyo abathengisi abayisebenzisayo ukucofa uguquko olongezelelekileyo kwindlela esele ikhona -indlela elungileyo yokufumana ishishini elininzi ngaphandle kokuchitha imali eninzi!
Yintoni uvavanyo lwe-A / B okanye uvavanyo lokwahlulahlula
Uvavanyo lwe-A / B okanye uvavanyo lokwahlulahlula njengoko kuvakala, luvavanyo apho uvavanya iinguqulelo ezimbini ezahlukeneyo zePhepha lokuFika ngaxeshanye. Ayisiyonto ngaphandle kokusetyenziswa kwendlela yesayensi kwimizamo yakho yokuthengisa kwi-Intanethi.
Isitshixo esinye sokuqinisekisa ukuba unedatha eyimfuneko yokuxhasa iziphumo kukulinganisa ivolumu yabatyeleli kunye nokuguqulwa, kunye nokubala ukuba ngaba akukho siqinisekiso seenkcukacha manani kuvavanyo. I-KISS Metrics ibonelela ngesiqalo esihle kwi Uvavanyo lwe-A / B lusebenza njani kunye nesixhobo se ukubala ukubaluleka zeziphumo.
Kuvavanyo lwabo lwe-A / B lokunxibelelana, uLanders uhamba nomsebenzisi ngokuvavanya ngempumelelo iphepha labo lokufika kunye nokubonelela ngengxelo kwiziphumo:
Hlala uvavanya into enye kuvavanyo ngalunye njengoyilo, umxholo, isihloko esisezantsi, ukubiza isenzo, imibala, ubungqina, imifanekiso, iividiyo, ubude, ulwakhiwo kunye neentlobo ezahlukeneyo zomxholo.
Khetha ukuba uvavanye ntoni kwaye uphuhlise iinguqulelo ezahlukeneyo ngokusekwe kwindlela oziphethe ngayo, eyona nto uyenzayo kunye nolunye uphando. Khumbula, inye kuphela into kuvavanyo ngalunye ekufuneka isetyenzisiwe kwaye ivavanywe.
Qhuba uvavanyo ixesha elide ngokwaneleyo ukuze ufumane isiqinisekiso seenkcukacha-manani seziphumo, kodwa qiniseka ukuba uyaluphelisa uvavanyo kwaye ubeke ingxelo yakho ephumeleleyo ngokukhawuleza ukuze wandise uguquko.
Ngesixhobo sikaLander, unokwenza kwaye uvavanye ukuya kwiinguqulelo ezintathu ezahlukeneyo zephepha ngalinye lokufika ngaxeshanye. Oko kuthetha ukuba uya kuba nakho ukwenza iinguqulelo ezahlukeneyo zephepha lakho lokufika phantsi kwe-URL efanayo.
tags: vavanyoumnini mhlabaUvavanyo lwephepha lokufikaukuvavanywa kwephepha lokufikauvavanyo lokwahlulahlula
Isiseko seQhinga lokuThengisa eliPhumeleleyo
Mar 6, 2015 ngo 2:25 PM
Molo Douglas! Enkosi ngokuchaza indlela yokuqhuba uvavanyo lwe-AB lwePhepha lokuHlala usebenzisa iLander. Inkcazo enkulu kunye neengcebiso eziluncedo! Simema abafundi bakho ukuba bazame iiNtsuku ezingama-30 zovavanyo lwasimahla kwaye bandise amaPhepha abo okuLandisa. Imibuliso!